Xisbiga Kulmiye marka aad doonayso in aad ka mid noqoto, waa in aad reer la yaqaan oo Kulmiye taageera sheegataa ama aad daba fadhi u noqotaa? | Awdalpress.com
Xisbiga Kulmiye marka aad doonayso in aad ka mid noqoto, waa in aad reer la yaqaan oo Kulmiye taageera sheegataa ama aad daba fadhi u noqotaa?
Waxa Daabacay staff-reporter on Dec 16th, 2016 and filed under Daily Somali News, OPINION. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Waxan ka soo jeedaa gobolka Awdal, waxanan doonayaa in aan ku biiro xisbiga Kulmiye, maxaa shuruud ah ee la iiga baahan yahay?
Sida socota ee sharciga ah, maanta qof qof ma joogto, waxa ay joogtaa reer reer, waayo qofka kelida ahi xisbiga waxba kuma soo kordhinayo. Reerihiina way kala wada bexeen, oo gobol walba waa la yaqaannaa reeraha degaa xisbiga ay ku jiraan. Markaa haddii aanad ahayn Beesha Zaylici amma Dhawl waxa aad soo martaa musdanbeedka reeraha Maxad Case amma Habar Cafaan. Si laguu hubiyo in aad run sheegayso. Shuruudduna waa in jufada aad tahay ay hoos tagtaa labadaa beelood. Ta kale beelaha Makaahiil, kalsooni laguma qabo, waxase xisbiga Kulmiye aad u soo dhaweynayaa shakhsiyaadka wararka u keena xisbiga, ee ka soo horjeeda xisbiga Waddani.
Bal dawladdii Kulmiye oo hadlaysana aan dhegeysanno.
Haddii aad ka soo jeeddo, Garxajis kkkkk waa in aad iska diiwaan gelisaa musdanbeedka Muse Biixi ama aad Madaxtooyada xidhiidh fiican la leedahay, laguguna yaqaannaa in aad wararka u geyso, si laguu hubiyo in ay run kaa tahay in aad xisbiga gelayso iyo in aad lacag uun doonayso. Habar Jeclo haddii aad tahayna, waa in aad Xirsi neceb tahay, oo aad leedahay record fiican oo markhaati ah.
Anigu waxan ahay qurba joog, waxanan jecelahay in aan Kulmiye taageero, fursadna uma haysto in aan is aragno musdanbeedka, dee sideen markaa ku geli karaa xisbigaasi, wax badanna dalka waan tari karaa?
Xisbiga Kulmiye waa jecel yahay qurba joogta, weliba kuwa dadkooda ku soo jiida Kulmiye, laakiin dalka aad joogto laantiisa kuugu dhaw gal, oo bixi lacagta xisbiga, xafladaha iyo nashaadka xisbiga ka qayb qaado. Laakiin waa in aad qabyaaladdana barataa, oo haddii aad gobollada galbeedka ka soo jeeddo la xidhiidhaa oday dhaqameedyada reeraha Zaylici iyo Dhawal. Haddii aad reer Hargeysa tahayna waa in lagu baadhaa. Gobollada Bariga sida Ceeri Gaabo iyo Laascaanood xisbigu kama helo.
Waxan ahay muwaaddin reer Somaliland ah mana jecli qabyaaladda, waxanan u haystaa in a aanay dadka iyo dawladnimada midna u fiicnayn, markaa qofka sidaasi ah muxuu xisbiga Kulmiye ka yeelayaa?
Xisbiga Kulmiye waxa uu la socdaa, wakhtiga qabyaaladduna waa ta keliya ee uu ku caano maalo, hore ayaa uu ugu guulasytey in uu ku hanto hoggaanka dalka. Immigana waxa u qorshaysan in uu qabyaaladda isticmaalo si uu u guulaysto. Reerkii xisbiga ka mid noqda ee ceelalyo fiican sameeyaa, iyaguna dawladda qayb weyn iyo ceelalyo fiican ayey ka helayaan.
Laakiin qabyaalad ma aqaan sheekada nooguma jirto, waanad iska raalli ahaanaysaa.